Fikradda naqshadaynta ee 24 Star Tattoos Fikradda Wanaagsan ee Ragga iyo Dumarka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
Fikradda naqshadda ee 24 Star Tattoos Loogu Talagalay Raga iyo Haweenka
Sawirada xiddigaha aan la dayicin karin oo aan la iska indha tirin xitaa ragga iyo haweenka ragga ah. Waxaan aragnay jimicsi lagu duubay tattoo this sababtoo ah sida quruxda u muuqata. Markaad aragtid xiddigaha samada, marwalba way qurux badnaayeen.
Tartoo Xiddig ah
Tattoo Watt Star
Waxaa jira naqshadeeyayaal ku takhasusay sawirada kala duwan. Waxyaabaha wanaagsan ee aad adigu u sameyn kartid waa inaad hesho fannaani ku takhasusay tattoo this. Sanado badan, dadku waxay bilaabeen inay u baxaan tattoo. Ha u tagin farshaxanada baranaya.
Waxay noqon kartaa wax aad u xun in la sameeyo sababtoo ah waxaad heli kartaa tattoo oo aan u fiicnayn tan tan.
Tattoo jirka oo buuxa
Tattoo Tani waa mid aad u qurux badan sababtoo ah waxaa si fiican u dhigtay jirka. Ma jirto qayb ka mid ah jirkaaga halkaasoo tattoo-gaaga aanad u muuqan karin. Waxaan aragnay markii ugu horeysay ee dadku ay isticmaalaan shaatiinka meelaha qaarkood.
Markaad wax iibsaneyso, way fududahay in la helo qiimo cad oo tattoo-gaaga ah. Waa inaad marnaba wax u dhimeyso caafimaadkaaga haddii aad tattoo qaadato
Tartoo-Flower Star Tattoo
Tani waa sababta aad u isticmaali lahayd khabiir tattoo ah. Waxaa jira khabiiro badan oo ka shaqeeya halkaan si ay u taageeraan dabeecadaada hal-abuurka ah marka ay timaaddo tattoo cajiib ah sida tan.
Waxaa jira macnooyin badan oo la yimaada iyadoo la isticmaalayo tattoos #star ee jirka. il image
Jilayaasha waxaa loo yaqaan inay calaamad u yihiin rabitaanka dadka taasoo ah sababta ay dad badani u isticmaalayaan iyaga. il image
Xuruufta iyo quruxda leh ee la timaadda isticmaalka xiddigaha lama soo koobi karo taas oo ah sababta ay caan u yihiin maalmahan. il image
Waxaa jira waxyaabo badan oo naqshado ah oo aad kala dooran karto marka aad rabto in aad hesho xiddig khaas ah. Tiltooska xiddigu wuxuu noqon karaa mid fudud laakiin wuxuu kaloo ku xiran yahay nooca xiddiga aad rabto inaad hesho. il image
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad uga dhigi karto xiddigtaadu inay si gaar ah u eegto habka aad u qurxinayso xiddigtaada ama xitaa ku daro qaabab kale ama naqshado. il image
Waxaa jira doorashooyin badan iyo fursado aan dhammaad lahayn markaanu isticmaalno xiddigaha sida shaatiinka. il image
Celebrities waxaa loo yaqaanaa inay noqdaan kuwo aad u jecel xiddigaha iyo shakhsiyaadka isticmaala xiddiga ay jecelyihiin. Isticmaalka xiddigaha waxaa loo isticmaali karaa inay u matalaan qof si gaar ah ugu tiirsan. il image
Isticmaalka xiddig, si fudud ayaad u heli kartaa qof lagu aqoonsado noloshaada. Xiddigu wuxuu noqon karaa curaarta kaa caawinaysa inaad qof kale kuugu dhawaato. Qof kastaa wuxuu isticmaali karaa tan #tattoo macnaheedu wuxuu yahay in nin ama naag ay isticmaali karaan. il image
Jilayaasha waxay ku imaan karaan qaabab kala duwan iyo qaabab. Ma jeceshahay naqshadahan? Tilmaamyada naqshadahan waxay ku yimaadaan noocyo kala duwan iyo qiyaaso kala duwan. Qaar ka mid ah waxay u eegi karaan xiddigo ay u muuqdaan mararka qaarkood, waxay u eegi karaan wax yar il image
Dhammaan waxay kuxirantahay waxa uu sawiruhu soo saari karo. Ma jirto wax aad sheegi kartid waxa aad ku gaari kartid markaad rabto inaad hesho tattoo xiddigaaga ah. il image
Naqshadani waa mid aad u fiican oo leh midabkiisa iyo qaababka. Dumarka ah fashonistas, waxay hubaal ahaan u jecel yihiin. Miyaadan u malaynaynin? Tani waa hal naqshad abuur ah oo soo jiidan doona taxadar badan oo ku saabsan qofka xiran. il image
Ugu dambeyntii, xiddiguhu waa mid ka mid ah tattooska ugu fiican ee gabadhu isticmaali karto si ay u sameeyaan cadeynta tattoo. il image
Tattoos badan oo fikrado ah oo loogu talagalay gabdhaha
tattoos taajkiitattoos iskutallaabtahenna tattooku dhaji tattoossawirada gabdhahatattoo indhahalammaanahatattoos sleeveshaatiinka shiidanTattoos Wadnahatattoos moontattoo biyo ahTattoo FeatherTilmaamta jaalaha ahnaqshadeynta mehnditattoo ah octopussawirada malaa'igtaTartoo ubax badanwaxaa la dhajiyay tattoosDhaqdhaqaaqamuusikada muusikadalibto libaaxtaraagada kubbaddatattoos ubaxlaabto laabtafikradaha tattooshimbir shimbirtattoo dheemanJoomatari Tattoostattoos qorraxdaarrow Tattoogaraacista gacmahatattoos qosol lehtattoosjimicsiga bisadahatattoo maroodigaTattoo infinitycalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoos saaxiib saxa ahtattoos cagtasawir gacmeedtattoo tilmaankoi kalluunkagadaal u laabosawirrada raggatattoos qoortatattoos qabaa'ilkawaxay jecel yihiin tattoostattoos gacantatattoos eagle